လူမှုစံနှုန်း ခြောက်ချက် ချိုးဖောက်နေသည့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် အကောင့်များကို ဖျက်သိမ်း အရေးယူသွားမည - Yangon Media Group
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးစွဲသူ မြန်မာပြည်သူများ၏လုံခြုံရေးအတွက် အမုန်းစကားများအပါအဝင် လူမှုစံနှုန်းခြောက်ချက်အား ချိုးဖောက် နေသည့်အကောင့်များကို ဖျက်သိမ်းအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာအပါအဝင် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအ ကောင့်ပေါင်းသန်း ၁၄ဝဝ ကျော်ကိုအရေးယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လူမှုစံနှုန်း(၆) ချက်မှာ (၁) ပုံရိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှု၊ (၂)အဖော်အချွတ်၊ (၃)လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများ၊ (၄)အကြမ်းဖက် ဝါဒဖြန့်ချိမှုများ၊ (၅)အမုန်းစကား၊ (၆) အကောင့်တုများနှင့် Spam များပါဝင်ပြီး အရေးယူသင့်သည့် အကောင့်များကို အရေးယူနိုင်ရန် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဖွဲ့သို့ Report လုပ်တိုင်ကြားကြရမည်ဖြစ်သည်။ ”ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်က ချမှတ်ထားတဲ့ ပေါ်လစီတွေရှိပါတယ်။ အမုန်းစကား တွေ၊ အကြမ်းဖက်မှုသဘောဆောင်တဲ့အရာတွေ၊ ကလေးသူငယ်လုံခြုံ ရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့အရာတွေကို အဓိကထားဖျက်သိမ်းပါတယ်။ အဓိကကတော့ လူမှုစံနှုန်းတွေနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ အကောင့်တွေကိုဖျက်သိမ်းပါတယ်။ လူအချင်းချင်းတိုက် ခိုက်မှုစကားတွေကလည်း စံနှုန်းထဲမှာပါပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တဲ့စကားတွေကို ခွင့်မပြုထားပါဘူး”ဟု ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မြန်မာအဖွဲ့မှ Content Policy Myanmar Sheen Handoo က ပြောသည်။
ဇွန် ၈ ရက်တွင် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၌ ကျင်းပသည့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မြန်မာမီဒီယာများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ၄င်းကပြောသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မြန်မာအဖွဲ့မှ Public Policy Director Mia Garlick က အကောင့်များ ဖျက်သိမ်းအရေးယူပုံနှင့်ပတ်သက်၍ ”ကျွန်မတို့ဆီကို သတ်မှတ်ချက်တွေကို ချိုးဖောက်နေတဲ့အကောင့် တွေကို Report လုပ်ပြီးတိုင်ကြားနိုင်တယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ပေါ်လစီက ဘယ်လို User က Report လုပ်လုပ် အဲဒီသူပေးပို့ လိုက်တဲ့အကောင့်ကိုကြည့်ပြီး Report လုပ်ခံရတဲ့အကောင့်က ကျွန်မတို့ချမှတ်ထားတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်လစီနဲ့ မကိုက်ညီရင်၊ လူမှုစံနှုန်းတွေနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့အချက် တွေရှိရင် ဖျက်သိမ်းပြီးအရေးယူပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ အကယ်၍မှားယွင်းပြီး ဖျက်သိမ်းအ ရေးယူခံရသူများအနေဖြင့်လည်း ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဖွဲ့ထံ ၂၄ နာရီအတွင်းဆက်သွယ်ပြီး ပြန်လည်တောင်းခံသည့် Request လုပ်နိုင်ကြောင်းသိရသည်။ ”မှားပြီးဖယ်ရှားခံရတာတွေလည်း ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်။ ၂၄နာရီအတွက် လက်ခံပေးမယ်။ ပြန်ပြီးတော့ Request ထားနိုင်ပါတယ်” ဟု Product Manager Sara Su က ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် လူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲသူ ၁၈ သန်းခန့်ရှိနေပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အနေဖြင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မလျော်ညီသော အဖော်အချွတ်များ၊ လိင်ကိစ္စများကိုလည်း ဖယ်ရှားနေကြောင်း၊ သတင်းအမှားများ နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းမီဒီယာဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းနှင့် အမုန်းစကား၊ အကြမ်းဖက်စကား၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တိုက်ခိုက်သည့်စကားများကို ဖယ်ရှားနိုင်ရန် မြန်မာဘာသာတတ်ကျွမ်း သည့် မြန်မာလူမျိုးများကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ဝန်ထမ်းများအဖြစ် တိုးပြီးခန့်အပ်တာဝန် ပေးနေကြောင်းသိရသည်။ ၂ဝ၁၈ခုနှစ်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအနေဖြင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှ ပုံရိပ် ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးဖောက်သော အကောင့် ပေါင်း ၃ ဒသမ ၄ သန်း၊ အဖော်အချွတ် နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများ ဖော်ပြသည့် အကောင့်ပေါင်း ၂၁ သန်း၊ အကြမ်းဖက် ဝါဒဖြန့်ချိမှုများ ၁ ဒသမ ၉ သန်း၊ အမုန်း စကား ၂ ဒသမ ၅ သန်း၊ အကောင့်တုများ ၅၈၃ သန်းနှင့် Spam များ ၈၃၆ သန်း၊ စုစုပေါင်းအကောင့် ၁၄၄၇ ဒသမ ၈သန်း အထိ အရေးယူဖျက်သိမ်းခဲ့ကြောင်း ဆွေး နွေးပွဲတွင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
ရွှေပြည်သာ အထည်ချုပ် လုပ်သားတို့၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက် ပြေလည်မှု မရသေးသဖြင့် သုံးကြ??
‘ကျွန်တော့်ကို ထောင်ဝင်စာ လာတွေ့တဲ့သူ အရမ်းနည်းပါတယ်။ မျှော်လင့်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ??